Ma Types eMHECHE Dzakasiyana Siyana... - Masasi eHarare
Crazy News Ma Types eMHECHE Dzakasiyana Siyana…
Ndimi munoti mapeche akafananaka imi? Kune ma types emheche akasiyana siyana…
1. Muhomba – Iri ibeche riya rinenge rakazvimbirira kunge muhomba wembambaira , kune mukadzi wese anaro chipo chikuru. Kashoma kuona murume ane mukadzi ane muhomba achiita zvemasmall house nekuti beche iri mudyandakasungwa chaivo zvokuti unonamira kunge shiri iri paurimbo uchinakirwa chete . Beche iri rinowanzo wanikwa pavakadzi vaye vanedzinenge nyora mutsapfu umu zvichikwira kuenda nemuzvidya , mumatako
zvojamba zvozoperera mumazamu umu (nyangahadzi) .
2. Mugodhi – Mheche iyi iri flat asi yakadzika sezita rayo. Beche iri rinotapira sehuchi chaihwo asi haringotapiriri munhu wese , kazhinji varume vaye vanetupfupi (tumboyo) hapana kwavanosvika uye mukadzi hapana chaanonzwa zvokuti anogona
kutoruka zvake madhoiri ake uku murume ane kapfupi achitofiririra – zvinotoda vana murehwa vane hombe hombe !
3. Bhavhama OR Kwazumukwazu – Nderiya beche remazigadzi ane mazitako makuru risingatani kubuda mvura (ku Oila) saka rinokasika kuipa kana risakagezwa on time. Apa inongopinda yose nyorenyore yobva yatotunda fast because rinodziya seremukadzi ane nhumbu riya.Mazigadzi ane bhavhama ane problem yekuwandirwa nezemo zvokuti akapedza 2days asina kusviirwa anoita masturbation uye anenge ave very rough kumunhu vose !
4. Daramombe – Beche iri rinenge rakagadzirwa zveshuwa ! Matinji anenge akaita
zvekurembera zvokuti usakanyatsoritarisisa ungatofunga kuti imboro diki dziya.Rinovanikwa pavakadzi vaya vanodhonzewa makongo vachirikukura , rinenge rakaita sereiya mombe ichangozvara. Saka unogona zvako kuayamwa matinji aya nokuti mahombe kupfuura nyatso dzezamu uye ari tastey. Iri rinonakidza kubatabata nekudhonza dhonza zvokuti unogona kubva watotunda usati waisa saka riri very porpular nevarume vose .
5. Nyini Bhavhu – Iri ibeche rakangovata vata rekuti unoita sewakaisa mudhishi rizere mvura iri warm. Hapana nezviripo kungoisavo asi unogona kutotadza kutunda kwacho coz harinaki.
6. Munyorondega – Iri ibeche rakaipa kwazvo !Rinongogara richibuda mvura saka
kazhinji rinonhuwa kana kukanda hwema , rinoshata zvekushata zviya . Unoti kana
uchiriisa unoita kunge urikudhihwina musewage chaimo. Mheche yakadai iyi inogona kukurambisa nemurume !
7. Chikomo OR Churu – Murume anenge azviwanira zvake mukadzi ane
beche rerudzi rwechuru urwu akakomborerwa zvikuru ! Iri ibeche rakaurungana uye rakafutirira nekuzvimba kupfuura riya remuhomba uye rakadzika. Choya charo chisakagerwa beche iri rinobva raita mbuva chaiyo zvekuita sekunge mukadzi akaisa zimbeva mubhurugwa. Nyinyo iyi huchi , rinonaka zvokuti mboro inotunda asi yongoramba yakamira chete ichingonzwa kuda futi ichingorimo imomo pasina kumbobuda .
8. Chitsoka Chemhene – Ichi chipeche chevakadzi vaye vanemahips , chinenge chiri mukatikati zvokuti unotombochishaya plus ukachirova zvakanaka chinoita zvekusveta
(kudhonza) mboro – unongonzwa murume ave kuchema asina kumborohwa uku kuri kunakirwa nemheche iyi. Mukaona murume achisiya imba yake achienda zvachose kusmall house haisi mhosva yake anenge akasangana nechitsoka chemhene ichi ikoko.
9. Chitsoka Chetsoko – Beche iri kazhinji rinowanzo wanikwa patusikana kana tukadzi tutetetete asi twakaumbika pawest apa zvose nemutsapfu umo. Kanenge kamuhomba like , uye kari kamugodhi like. However , beche iri manhanga kutapira , uye vakadzi vanaro chikapa chavo ndechengwena chaicho saka varume musazoshora mbodza neinozvimbira.
10. Mbudu – Aka kanenge kari shallow & tight saka kanorwadzirira kumboro kana kutoisvuura chaiko kunge virgin. Ndiko kapeche kekuti unodhinda ugodhinda asi kanongoramba kachingori dry chete. Kunyangwe ukaromancer mukadzi anembudu sei kapeche aka hakatoti sezvinoita mamwe mapeche ose saka kanoda long play chaiyo ozokatundira panze pamusoro paro kuti katombototavo asi hakatani kuoma again kega. Beche rerudzi urwu rinowanikwa pavakadzi vaye vari hairy mumakumbo kana vane tundebvu tushomanana pachirebvu kana pachipfuva. Vanonaka ivava .
11. Kapeche Uswa – Aka kapeche kangorivoo pamunhu . Kadikidiki kunge kemwana mucheche. Usually kana uchiisa mukadzi anekapeche uswa anenge achichemerera , kwete
zvekunakirwa but kurwadziwa.
12. Chakwata – Aka kapeche kechihure kanenge kakati kwati kwati mumhango yezvidya , kari very attractive uye kanomera tuchoya tushomanana kachiratidza kunge kadikidiki asi inopinda yose kunyangwe ikakura sei, Mukadzi uyu kungoona murume chete zemo rinenge rotoyerera netsinga dzose , kuzoti kungobatwa chete – nekutunda onetime . Kanonaka zvokuti ukakafunga urikure unodzoka chete !
13. Pwashanu – Ibeche risina shape , chinoita kunge chironda uye rinoita kunge riri padumbu chaipo -harinzwisisike , however rinozongosviirwavo nokuti hazvizoenzani nekurara mugota.
14. Chitititi OR Senakunina – Chipeche ichi chinowanikwa zvikuru kune waya wari slim vari
varefu & chiri suitable for back attack chete(mufongorerwa) . Iri rinoruma kana kusunga mboro kuti shweshweshwe chaizvo zvokuti inogona kutomborambirira imomo yakabatwa
naro ichingonakirwa chete. Beche iri rinotora shape yemboro inenge irimo panguva iyoyo, kunyangwe riri zimubhadha kana kuti kadikidiki unongotapirirwa chete.
15. Nzeve Yatsuro – Iri zibeche zihombehombe rinoita kunge tsuro akarara mugwenzi. Rinowanikwa pamukadzi vose vose anenge angoitavo lucky/munyama wekuzvarwa naro. Mukadzi vose ane rudzi urwu anongonzwa kuda kurara nemurume wese wese , haricontroleki saka rinongokwirwa kwirwa so rinogara rakango dhamba zvokuti harikwanisi kusvinyanga (kubatisisa) mboro sezvinoita mamwe mapeche kuti igokwanisa kutunda coz of over use. Varume vanosangana neiri vanozongopedzisa nebonyobonyo (masturbation) chaiyo i
Ma Types eMHECHE Akasiyana Siyana...
Ndimi munoti mapeche akafananaka imi? Kune ma types emheche akasiyana siyana